တပ်မတော်သားများ၏ ကွန်ရက်ကို ကြိုဆို
မြန်မာ့တပ်မတော်မှာ လက်ရှိ တာဝန် ထမ်းဆောင်နေတဲ့ တပ်မတော်သားတချို့ ဦးဆောင်ပြီး လျှို့ဝှက် ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ မျိုးချစ် တပ်မတော်သားများ ကွန်ရက်ကို ထောက်ခံ ကြိုဆိုကြောင်းနဲ့ တပ်မတော်သားများ အားလုံး အနေနဲ့လည်း ဒီကွန်ရက်မှာ ပူးပေါင်း ပါဝင်ကြဖို့ ဗြိတိန်အခြေစိုက် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု ( Burma Democratic Concern ) အဖွဲ့က တိုက်တွန်းနှိုးဆော် လိုက်ပါတယ်။
မြန်မာ့သမိုင်းမှာ ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံအတွင်း တပ်မတော်နဲ့ ပြည်သူလက်တွဲ ပူးပေါင်း ပါဝင်မှုတွေ ရှိခဲ့တာကြောင့် အခုလို တပ်မတော်သားတွေ ကွန်ရက်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အပေါ်မှာ ထောက်ခံ ကြိုဆိုရတာဖြစ်တယ်လို့ BDC အဖွဲ့ရဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမျိုးသိန်းက RFA ကို ပြောပါတယ်။
“မြန်မာ့ သမိုင်းကို ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် ၁၉၈၈ ခုနှစ် ပြည်သူ့ အရေးတော်ပုံကြီးမှာ ကြည်း၊ ရေ၊ လေ တပ်မတော်သားတွေဟာ ပြည်သူနဲ့ လက်တွဲပြီးတော့ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ခဲ့တယ်၊ ရလဒ်အဖြစ် ကျွန်တော်တို့ တပါတီ အာဏာရှင်စနစ်ကို ဖြုတ်ချနိုင်ခဲ့တယ်ခင်ဗျ။”
“ဒါ့အပြင်၊ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဆိုလို့ရှိရင်လည်း စစ်တပ်မြို့တွေလို့ ပြောလို့ရတဲ့ ဗထူးတပ်မြို့တို့၊ မင်္ဂလာဒုံ တပ်မြို့တို့၊ မှော်ဘီတပ်မြို့တို့ အဲဒီ မြို့တွေမှာကိုက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကို ကျွန်တော်တို့ အပြတ်အသတ် မဲပေးပြီးတော့ NLD ပါတီက လွှတ်တော်အမတ်တွေကနေပြီးတော့ ဒီ အနိုင်ရရှိခဲ့တယ်။”
“ဒါတွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် တပ်မတော်သားတွေရဲ့ စိတ်ထဲ အသည်းထဲမှာလည်း ကျွန်တော်တို့ ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေး ဆိုတာ သူတို့ဆီမှာ ရှိတယ်ဆိုတာ မြင်ရတယ်ခင်ဗျ။ ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူနဲ့ တပ်မတော်နဲ့ ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ လက်တွဲပြီးတော့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ပေါ့နော်၊ ဒီယနေ့ ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ မျိုးချစ်တပ်မတော်သားများ ကွန်ရက်ကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုထောက်ခံခြင်း ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။”
NLD ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း သူရ ဦးတင်ဦးလို မျိုးချစ် တပ်မတော်သားတွေ မြန်မာစစ်တပ်တွင်း အများအပြား ရှိနေတယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့အတွက် တိုက်တွန်းရတာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ဒီ မျိုးချစ်တပ်မတော်သားများ ကွန်ရက်ကို ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ဆန်းတရက်နေ့က ဧရာဝတီတိုင်းတွင်း တနေရာမှာ လက်ရှိ တပ်ကြပ်အဆင့် တာဝန်ယူထားတဲ့ စစ်သည် ၁၁ ဦးက ဦးဆောင်ပြီး လျှို့ဝှက် ဖွဲ့စည်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို တပ်မတော်သားတွေ ကွန်ရက် ဖွဲ့စည်းလာတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မကြာသေးခင်က ပြည်ပကို ထွက်ပြေး ရောက်ရှိလာတဲ့ မြန်မာ့ တပ်မတော် အရာရှိ ဗိုလ်မှူး စိုင်းသိန်းဝင်းကို RFA မှ ဒေါ်ခင်ခင်အိ က ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါတယ်။
Burma Democratic Concern (BDC) welcomes the formation of the Burma’s Patriotic Military Network
Burma Democratic Concern (BDC) welcomes the formation of the Burma’s Patriotic Military Network with reference to the BBC/Burmese news on 18 April 2011. According to the news the network is comprises of with Army, Navy and Air Force military personnel ranging from the ranks of the soldiers to major-general. Please see the link
According to the BBC/Burmese, the network members units and members are
1.	Hi-Gyi Island Navy Base,
2.	No. 501 Maw-Bi Air Force Base,
3.	Mait-Hti-La Air Force Training Base,
4.	Infantry Regiment 6,
5.	Light Infantry Regiment 7,
6.	Light Infantry Regiment 8,
7.	Main Military Ammunitions Storage Base,
8.	Main Electronic Engineers Base,
9.	Inn-Ma Army Base and
10.	Ye-Mon Infantry Regiment 214
Myo Thein, the Director of the Burma Democratic Concern (BDC) said “We are very glad to learn that patriotic soldiers of Burma are forming the “Patriotic Military Network” which we believe it will be leading towards working with the people so as to get rid of the military dictatorship system in Burma. We sincerely hope that the rest of the soldiers in the Burma military will follow steps joining the Patriotic Military Network.”
Recently on 13 April 2011, an army captain from Ka-La-Ya (91) based in Maw-Bi under the command of the Rangoon Division Military Command has fallen as the result of the shooting from military units outside the regiment which are taking position outside the Ka-La-Ya (91). Please see the report
Soldiers from various military bases including Ka-La-Ya (91) had called for the (4) demands since 28 March 2011 such as
1.	To review the constitution
2.	To amend the veteran soldiers law and increase the pension
3.	To find the solution of the Burma political crisis in political means
4.	To re-form the government which gains the support of the public
U Khin Maung Win, the Director of the Burma Democratic Concern (BDC) said “In Burma, it is our general beliefs that if the three sons of Burma are united together and joined hands together, we can bring about the change in Burma. In 1988 and 1996, the students (the sons of the schools) were spear-headed the public and opened the new chapters in Burma. In 2007, the Buddhist monks (the sons of the Lord Buddha) were at the fore-front of the public demanding the change in Burma. Now this time, we genuinely hope that the soldiers (sons of the wars) will take the lead bringing about the peace and prosperity in Burma.”
According to the BBC/Burmese
http://ping.fm/me1qO there are reports of the clashes between the combined forces of Ka-La-Ya (709) & (710) and Rangoon Division Special Forces resulting in one sergeant had fallen and4injured of which3seriously wounded.
U Tint Swe Thiha, the Patron of the Burma Democratic Concern (BDC) said “The Burma soldiers have the good reputation of standing with the public decisively when the time is necessary. When we look at the 1988 mass uprising, the Burma soldiers from army, navy and air-force joined hands together with the public and united together. As the result, General Ne Win led one party authoritarian regime was toppled leading toward holding the election in 1990 in which Daw Aung San Suu Kyi led National League for Democracy (NLD) won the land-slide victory.”
Burma Democratic Concern (BDC) understands that most of the soldiers in the Burma military wanted to serve the people and the nation rather thanabunch of the corrupted dictator generals.
Daw Khin Aye Aye Mar, the Patron of the Burma Democratic Concern (BDC) said “In Burma, Maw-Bi, Taik-Gyi, Min-Gala-Don and Maik-Hti-La constituencies are right to say the military towns since they are mostly hosting soldiers of the military bases. In 1990 election, almost all of the military towns voted for the Daw Aung San Suu Kyi’s Party and elected the NLD MPs. Now, the time is RIGHT again and we honestly hope that patriotic soldiers will take action decisively leading towards national reconciliation in Burma.”
Burma Democratic Concern (BDC) expresses our solidarity with the patriotic soldiers fighting for their rights and we would like to call for all the people of Burma to welcome the brave patriotic soldiers.
00-44 208 493 9137
00-44 787 788 2386
Fax No:+44 208 626 9045
Posted by Burma Democratic Concern at 02:42
တပ်မတော်သားများ၏ ကွန်ရက်ကို ကြိုဆို 2011-04-19ြ...